उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणामः कहाँ कसले जित्यो ? (पूरा विवरण) - Everest Dainik - News from Nepal
उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणामः कहाँ कसले जित्यो ? (पूरा विवरण)
काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम परिणाम बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा विजयी भएको छ । तीन प्रदेशसभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक एक स्थानमा जित हात पारेको छ ।
याे पनि पढ्नुस उपनिर्वाचनः के गर्नु हुँदैन मौन अवधिमा?
निर्वाचन आयोगले सोमबार अपरान्ह प्रकाशन गरेको अन्तिम परिणाम अनुसार नेकपा सबैभन्दा बढी ३० स्थानमा जित हात पारेको छ । नेकपाले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेशसभा सदस्य, तीन स्थानीय तहको अध्यक्ष पदमा जित हात पारेको छ । बाँकी उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष पदमा नेकपा उम्मेदवार निर्वाचित भएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस मंसिरमै चुनाव गराउने तयारी
नेपाली कांग्रेसले १३ स्थान जित हात पारेको छ । कांग्रेसका उम्मेदवार एक प्रदेशसभा सदस्य र धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा जित हात पारेको हो ।
समाजवादी पार्टीले चार तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले तीन स्थानमा जित हात पारेको छ । एकजना वडाअध्यक्ष स्वतन्त्र निर्वाचित भए ।
याे पनि पढ्नुस उपनिर्वाचनमा सबैको आँखा कास्की–२ मा, कसले मार्ला बाजी?
ट्याग्स: उपनिर्वाचन, निर्वाचन आयोग
भारतमा गहना व्यापारीको परिवारका ४ जना झुन्डिएको अवस्थामा फेला